काठमाण्डौ सहित उपत्यकाका तिन जिल्लामा ठुलो संख्यामा थपिए को’रोनाका नयाँ सं’क्रमित ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाण्डौ सहित उपत्यकाका तिन जिल्लामा ठुलो संख्यामा थपिए को’रोनाका नयाँ सं’क्रमित !
काठमाडौं-नेपालमा आज थप २०४ जनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा को’रोना सं’क्रमितको १६ हजार १६८ संख्या पुगेको छ । त्यसैगरि पछिल्लो २४ घण्टामा ६८८ जना को’रोना सं’क्रमणमुक्त भई घर फर्किएका छन् । योसँगै नेपालमा को’रोना सं’क्रमणमुक्त भई घर फर्किनेको संख्या ७ हजार ४९९ पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यका को’रोना भा’इरसको उच्च जो’खिममा परेको छ।
सं’क्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि उपत्यका को’रोनाको उच्च जो’खिममा परेको हो। मंगलबार मात्र थप २८ जनामा संक्रमण देखिएको छ। सं’क्रमितमध्ये काठमाडौंका १४, भक्तपुरका ४ र ललितपुरका १० जना रहेका छन्। सोमबार मात्रै थप ५४ जनामा को’रोना भा’इस सं’क्रमण देखिएको थियो भने आइतबार ३० जनामा सं’क्रमण देखिएको थियो।
सोमबार काठमाडौंको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचारत केही बि’रामीमा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ।बि’रामीमा को’रोना देखिएपछि अस्पतालले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेको छ। यस्तै को’रोना सं’क्रमणमा उडानका कर्मचारी पनि परेका छन्। सोमबार मात्रै नेपाल वायुसेवा निगमका सातजना कर्मचारीमा को’रोना स’ङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको थियो।उनीहरु सबै को’रोनाका कारण विदेशमा अ’लपत्र परेका नेपालीको उद्दारमा खटिएका थिए।
कोभिड–१९ का स’ङ्क्रमितसँगै अरु किसिमका बि’रामीको उपचार गरिरहेको पाटन अस्पतालमा आउने बि’रामी र कुरुवाले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको पाइएको छैन । अस्पतालमा पुग्दा कतिपय कुरुवा र बिरामी समूहमै बस्ने र माक्सको प्रयोग नगरेको देख्न सकिन्छ ।
अस्पतालको बहिरङ्ग विभाग, वार्ड र कतिपय विभागमा बि’रामी समूह समूहमा बस्ने गरेका छन् । अस्पतालले ठाउँ ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गर्न भन्दै सन्देशमूलक सामग्री टाँसेको भए पनि बि’रामी र कुरुवाले त्यसको पालना गरेको पाइदैन । कतिपयले माक्सको प्रयोग समेत नगरेको पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा स’ङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालको आइसोलेसन भरिएको छ । अरु स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने पनि क्रमिक रुपमा बढिरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा आउने बि’रामीलाई कोभिडबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भए पनि बेवास्ता गरिरहेको निर्देशक डा विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । आमनागरिक सचेत नभएकोभन्दा पनि अटेरी भएको उहाँले बताउनुभयो । दुई महिनासम्म बन्दाबन्दी किन भयो र हामीले यो रोगबाट बच्न के गर्नुपर्छ भन्ने धेरैलाई जानकारी छ । सञ्चारमाध्यमले पनि पटक पटक हात धुनु, माक्स लगाउनु र सामाजिक दूरी कायम गर्नु भनिरहेको छ । लकडाउनको कारण धेरैले दुःख पाएको, काममा जान नपाएको र कतिपयले खान पाएनन् भन्ने धेरैले बुझेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो कुरा बुझेर पनि भी’डभा’ड गरिरहेको देखिन्छ ।”
निगमले सार्बजनिक गरेको अन्तराष्ट्रिय नयाँ उडान तालिका यस्तो छ